www.sapanasansar.com: ए एन एम एन दशै तिहार कार्यक्रम २००९ संपन्न !
ए एन एम एन दशै तिहार कार्यक्रम २००९ संपन्न !
ए एन एम एन(एसोसियसन अफ नेप्लीज इन मिनिसोटा)ले गत साल को जस्तै यो साल पनि दशै तिहार कार्यक्रम आयोजना संपन्न गरेको छ । नेपाली मन र मस्तिष्क तथा दशै तिहार को झझल्को दिलाउने प्रस्तुतीहरु सार्है प्रसंसनिय थियो ।
प्रस्तुत कार्यक्रमका केहि फोटो तथा भिडियो हरु तल पेश गरेको छु ।
नोट : तपाई यहा भएका कुनै पनि तश्वीर हरु हाई रिजोलुसन(३८८८, ‌‌२५९२ पिक्सल) मा डाउनलोड गर्न चाहनु भएमा माथिको स्लाईड सोमा डबल क्लिक गरेर पिकासा को वेभ एल्बमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नु हुनेछ। प्रति पिक्चर साईज लग भग ३।५ एम बि छ ।
मैले केहि भिडियो दृष्यहरु पनि खिचेको थिए,हेर्नलाई भित्र आउनुहोस् ।
प्रस्तुत कार्यक्रममा लंगुरबुर्झा तथा कौडा पनि खेलाईएको थियो । साथसाथै केटाकेटिको लागी रमाईला रमाईला खेल कार्यक्रम हरु आयोजना गरिएको थियो । बिजयीहरुलाई फुलमाला सहित पुरस्कृत गरिएको थियो ।
प्रस्तुत कार्यक्रम मा केहि कामुक नृत्यहरु पनि प्रस्तुत गरिएका थिए , कर्यक्रम समापनको बेलामा भएको, शुवास सिलवाल को कामुक नृत्यले सबैलाई दंगै पारेको थियो ।
Posted by सपनासंसार at Tuesday, October 06, 2009
Related Posts : मनोरञ्जन , मेरो कलम
Labels: मनोरञ्जन , मेरो कलम
Nikai ramilo po bhayachha ta....Tyo budha ko sexy dance man paryo...
कामुक नृत्य vanda ali offensive vayena ra?
10/15/09, 9:45 AM
कामुक नृत्यलाई कामुकै भन्न पर्यो नि हैन र !
10/17/09, 2:15 AM